Fiainam-pirenena : Eny amin’ny HCC ny mason’ny rehetra -
AccueilRaharaham-pirenenaFiainam-pirenena : Eny amin’ny HCC ny mason’ny rehetra
03/01/2019 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mitopy any amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana (HCC) ny mason’ny rehetra amin’izao fotoana izao. Any amin’izy ireo tokoa mantsy izao ny baolina mahakasika ny fitsarana ilay voka-pifidianana avy eny amin’ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana (CENI), ary indrindra ny famoahana ny voka-pifidianana ôfisialy.
Noho izany indrindra, miankina amin’ny HCC ny fiainam-pirenena sy ny ho avin’ny vahoaka malagasy. Marihina mantsy fa tsy tokony ho maimaika izy ireo amin’ny fandinihina sy fitsarana ny voka-pifidianana avy eny amin’ny CENI isaka ny biraom-pifidianana sy ny fitanana an-tsoratra.
Toraka izany koa ny fandinihina sy fitsirihana ary fitsarana ireo fitoriana efa maherin’ny 1 500 eny anivon’izy ireo. Izany hoe, mila mandinika sy malina tsara ny HCC amin’ny fikirakirana ny voka-pifidianana rehetra. Marihina fa manana sivy andro izy ireo hiasana amin’iny voka-pifidianana avy amin’ny CENI iny.
Miankina tanteraka amin’ny famoahana ny voka-pifidianana ôfisialy avy amin’ny HCC mantsy ny fiainam-pirenena. Koa raha toa ka mbola misy tsy tomombana, ary ahitana vokatra tsy mitombina izany dia ny HCC no tompon’antoka voalohany amin’izay zava-mitranga eto amin’ny firenena sy tompon’antoka amin’ny fiainam-bahoaka, indrindra ny filaminana.
Raha ny marina, anjaran’ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana no miantoka ny fitoniana eto amin’ny tany sy ny firenena amin’izao kihon-dalana lalovan’ny Malagasy izao.
Ny HCC no hanova ny tantaram-pirenena, arakaraka izay fanambarana ataon’izy ireo mahakasika ny famoahana ny voka-pifidianana. Noho izany indrindra, tsy afa-miala izy ireo amin’izany. Tsy ho mora, araka izany, ny miandry ity andrim-panjakana iray etsy Ambohidahy ity. Eo am-pelatanan’izy ireo mantsy izao ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka, koa raha toa ka izy ireo indray no manao antsirambina ny andraikiny dia efa tompon’antoka tanteraka amin’izay miseho ny HCC…
Valanaretina pesta : Tsy mianatra ny mpianatra aorian’ny fandrarahana fanafody
Nanao fanambarana ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena, Paul Rabary omaly fa tsy mianatra, ary tsy tokony handeha any an-tsekoly ny mpianatra, raha tsy telo andro aorian’ny fandrarahana fanafody ireo toeram-pianarana rehetra. Voakasika amin’ity ady sy fisorohana ...Tohiny
Taom-baovao miavaka:Miaraka amin’ny RLM Communication